Nepwa Neptune. Ihe niile ị chọrọ ịma | Netwọk Mgbasa Ozi
Neptune ọ bụ mbara ala dị anya site na nke anyị niile Usoro anyanwụ. N'azụ ya bụ naanị "Planet Pluto na Oort Cloud, nke n’egosi njedebe nke sistemu Igwe anyi. Ọ bụ ụwa kachasị anya nke ndị dike gas niile (Jupita, Saturn y Uranus). N'ihi ọganihu na sayensị na mgbakọ na mwepụ ọ chọpụtara site na amụma gbasara mgbakọ na mwepụ. Aha ya sitere na chi Rome bụ Neptune ma akpọwo ya aha ya na-acha anụnụ anụnụ na n'ihi na Neptune bụ onye nwe mmiri niile.
N'isiokwu a ị nwere ike ịmụ njirimara niile nke mbara ụwa Neptune yana ịchọpụta ụfọdụ ịmata ihe pụrụ iche. Youchọrọ ịmatakwu banyere mbara ala ikpeazụ na Sistem Mbara Igwe? Ọ bụrụ n’ịnọgide na-agụ ya, ị nwere ike ịmụ ihe niile.
1 Ntọala data
2 Igwe ndọta na mgbaaka nke Neptune
3 Gases na ikuku
3.1 Ihe omimi na mgbanwe nke ikuku
Neptune Ọ bụ mbara ala kachasị anya na nke anọ na ọdụ nke ndị dike gas. Ma Uranus na Neptune ka amara dị ka ndị oke oyi n'ihi na okpomoku ha pere mpe n'ihi oke ha na Anyanwụ.Ọ bụrụ na anyị jiri ya tunyere mbara ala ndị ọzọ, ọ bụ nke anọ kachasị na nke atọ n'ọtụtụ. Ogo a nke nnukwu gas a ruru ugboro iri na asaa nke ụwa anyị.
O nwere radiọd nke 24.622 km ma dị anya na 4.498.252.900km site na Sun. N'adịghị ka ụwa anyị, nke na-ewe ihe dị ka awa 24 iji tụgharịa onwe ya (lee Mmeghari ntụgharị), a ice cream ibu na-ewe naanị 16 awa. Agbanyeghị, ngagharị gburugburu Anyanwụ nke na-akọwa ngabiga nke afọ na-aghọ ihe ebighi ebi. Ihe anyị bụ otu afọ (nke bụ ogologo oge ọ ga - ewe iji gaa Sun), maka mbara ala Neptune ọ bụ afọ 164,8.
Ọ na-akpọ a oyi kpọnwụrụ n'ihi na ya nkezi elu okpomọkụ dị na -220 degrees jiri ya tụnyere ogo 15 na ụwa anyị. Ebe ọ bụ na mbara ala ka ụwa ibu, ike ndọda ya na equator bụ 11 m / s2.
Mgbe a na-akpọ mbara ala ndị a nnukwu mmiri, ọ pụtaghị na ha nwere gas niile. Ihe ndị mejupụtara Neptune bụ nnukwu okwute a wụrụ awụ nke nwere mmiri mmiri, amonia mmiri na methane gas. Ihe njirimara acha anụnụ anụnụ abụghị n'ihi mmiri dị n'elu mmiri, mana isi ikuku ikuku ya bụ methane.
Igwe ndọta na mgbaaka nke Neptune
Ọ bụrụ na anyị enyochaa magnetik nke oke a oyi kpọnwụrụ akpọnwụ, anyị ga-ahụ nke ahụ Ọ na-achọ ihe ruru ogo 47 site na ntụgharị ntụgharị ma chụpụ kilomita 13.500 site na etiti ya. N'okwu a, ọ bụghị ọchịchọ nke ụwa na-eme ka ngbanwe a mee, kama ọ bụ ntụgharị nke ihe na gas dị n'ime ihe na-eme ka oghere electromagnetic gbanwee.
N'adịghị n'ihe a ga-ahụ, Neptune, dị ka Saturn, nwere mgbaaka. Enwetara ihe ngosi nke a site na ugbo elu Voyager II mgbe, na 1989, ọ jisiri ike ịse mbara ụwa ma gakwuru ya. Na mgbakwunye, ọ bụghị naanị na o nwere akara yiri mgbaaka, mana o nwere ọnwa asato. Nke a bụ ihe na-emebi atụmatụ, ọ bụrụhaala na anyị na-atụle njirimara nke ụwa dị ka ihe nkịtị. Ọ bụ ezie na na njedebe nke ụbọchị, ọ nweghị ihe ọ bụla dị mma ma debe ya, ebe ọ bụ na anyị bụ ụmụ mmadụ na-etinye edemede.
Ọ bụ ezie na ọ dị ka ihe echepụtara, Neptune nwere a usoro mebere 4 kama warara na mkpa yiri mgbaaka na a gwụrụ agba. Nke a bụ ihe na-eme ka a ghara ịmata ha na mbara igwe. Ihe yiri mgbaaka ahụ bụ ihe ndị sitere na urukpọ uzuzu nke adọkapụrụ kemgbe ọtụtụ afọ site na ọnwa ndị dị n’ime ya. Mpekere ndị a ejikọtara ọnụ site na ike ndọda ma ewepụla site na ọnwa ha site na mmetụta nke meteorites pere mpe.
Gases na ikuku
Dịka a pụrụ ịhụ, ebe ọ bụ na ọ bụ nnukwu gas, ikuku ya bụ akụkụ dị mkpa iburu n'uche. Enwere ike ịhụ ya ma ọ bụrụ na ejiri anya nkịtị nyochaa mbara ala ahụ na ọ nwere ntụpọ yiri oke ifufe ndị dị na Jupiter. Agbanyeghị, ntụpọ ndị a anaghị akwụsi ike dịka ọ dị na mbara ụwa ọzọ, mana ha na-etolite ma na-apụ n'anya ka oge na-aga. Nke a na-enyere anyị aka ịmata oke ọnụnọ nke oke ike mana ọ bụghị ogologo oge.
Ọ nwere a na-akpọ Great Dark Spot nke nwere nha nke mbara ụwa anyị, mana ọ lara n’iyi n’afọ 1994. Emechara nke ọzọ kee. Nke a n’eme ka anyi ghota uzo mmiri ozuzo n’eji n’enwe. Ekwesiri ikwuputa na ifufe nke na efe na Neptune aburula nke kachasi ike na mbara ala nile nke mejuputara Anyanwu. Ọtụtụ n'ime ikuku ndị a na-efe n'akụkụ ọzọ na nke ntụgharị ya ntụgharị.
Dị ka eziokwu dị egwu, na mpaghara ndị dị nso na Ọchịchịrị Ọchịchịrị Ọchịchị ahụ Enwere ike idekọ ikuku nke ruru 2.000 km / h. Ikekwe, mmadụ bụ onye ikuku ndị ahụ nwụrụ, ọ nwụrụ anwụ nke ikuku na-adọkpụrụ ma na-akụ ya.
Ihe omimi na mgbanwe nke ikuku
Foto ndị dị na mbara ala a n'akwụkwọ na akwụkwọ na-agbanwe kemgbe ọtụtụ afọ, ebe ọ bụ na edobeghị ya n'otu ụzọ ahụ. Ntụpọ ndị a kpụrụ ma bibie na-agbanwe ọdịdị ọdịdị nke anyị ji ahụ mbara ala. Banyere okpomọkụ, Edeela ọnọdụ okpomọkụ dị ala nke na ha anọwo -260 degrees, mgbe ọ nọ n'ụwa, ihe ndekọ kachasị ala bụ -90 degrees.
Ihe mejupụtara ikuku nwere hydrogen na helium na oke karịa na ụfọdụ nitrogen kpamkpam. N'elu elu anyị nwere ike ịchọta ebe nwere ice mmiri, methane na amonia ice (Mgbe okpomọkụ ndị a dị ala, ikuku na-agbazi). Igwe ojii abụghị alụlụ mmiri, ebe ọ bụ na enweghị anwụrụ ọkụ na ọnọdụ ndị ahụ. A na-eme ha nke methane oyi ma ha na-agbanwe ngwa ngwa.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu ihe banyere Neptune na njirimara ya pụrụ iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Nepwa Neptune